Banyere Anyị - Taizhou Huangyan Shentuo Vehicle Co., Ltd.
Companylọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara na imewe, ịhazi ya na ị rụpụta windshield ya maka igwe batrị ọgba tum tum. Site na mmepe nke teknụzụ, ụlọ ọrụ anyị na-eji ikike nrụpụta anyị, mepụtara ndị na-ebu azụ maka ọgba tum tum na scooters, yana akụkụ CNC maka ọgba tum tum. Anyị nwere ike ịmepụta windscreens n'ọtụtụ oke, ọdịdị, ihe na agba agba. A na-eme windscreens ka ọ dị nso na nkọwapụta ndị nrụpụta izizi (OEM) iji hụ na dabara adaba na ọgba tum tum gị na skuta gị.
IBX bụ akara nke Taizhou Huangyan Shentuo Vehicle Co., Ltd. e guzobere Taizhou Shentuo Vehicle Co., Ltd. na 1998 ma nwee ihe karịrị afọ 20 ahụmahụ. Ọ bụ ọkachamara na nrụpụta windo windo maka ọgba tum tum na ụgbọ ala batrị. Ọ nwere ọgaranya n'ichepụta ahụmahụ na-eduga technology. A maara anyị nke ọma maka ogo ya, ọnụahịa asọmpi na ọsọ ọsọ nke ọma.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ngwaahịa anyị na-ere nke ọma na Europe na America. Ngwaahịa a nabatara nke ọma site na ndị ahịa. Anyị ga-eme ike anyị niile iji nwee olile anya na anyị nwere ike iwetara gị ahụmịhe ịzụ ahịa kacha mma na ngwaahịa kacha mma. Na mgbakwunye, anyị na-anabata iwu na nkwupụta sitere na ndị ahịa mba ụwa niile. Ngwaahịa na-akwado mkpọsa na ahịa n'ahịa.
Retail Ma N'ogbe
Nhọrọ na Nhọrọ
Ntuziaka ahaziri ： Ikwesiri ịnye eserese ikuku, ezi ikuku ma ọ bụ ọgba tum tum. Mgbe ahụ kpọtụrụ anyị iji gwa anyị banyere ihe, ụdị, agba na oke nke ngwaahịa anyị nyere iwu .Ọ bụrụ na ndị ọrụ aka anyị ga-agbakọ ọnụego ezi uche dị na gị ozugbo enwere ike. Okwesiri iburu n'uche na ụfọdụ ngwaahịa chọrọ mmepe nke ebu, ma achọrọ ego ụfọdụ maka ngwaọrụ abrasive. Anyị na-enye gị ọrụ ahaziri iche iji hụ ihe niile masịrị gị.
Oge ahaziri ： izu abụọ
Retail Guide ： Iji lee nkọwa ngwaahịa na ọnụahịa zuru ezu, pịa na kọlụm ngwaahịa nke weebụsaịtị. Maka ngwaahịa na ajụjụ ndị ọzọ, biko soro anyị na Facebook, Intagram na Twitter. Nye ọrụ otu afọ mgbe erechara ahịa, dochie ngwaahịa ndị mebiri emebi n'ime otu afọ. Anyị nwere obi ike na ngwaahịa anyị ma kwenye na ọ nwere ike inye gị ahụmịhe ịzụ ahịa dị mma.
Nzụkọ Azụmaahịa Azụmaahịa ： Biko kpọtụrụ anyị, ị nwere ike ịnweta ozi ngwaahịa na ọnụahịa ndị ka amasị gị, anyị ga-abụ onye na-azụ gị kacha mma.
Nhọrọ nke agba ： Enwere ọtụtụ agba ịhọrọ. Okwesiri ighota na udiri elu nke ikuku a adighi akwado iji efere ndi ozo (Brown, Black, Smoky gray, Transparent, Fluorescent yellow, Orange)
PC （Hardened polycarbonate） ： Họrọ akwa-obi tara akpụ polycarbonate ihe onwunwe, nke nwere ibu siri ike, ọxịdashọn-eguzogide, anwụ ngwa ngwa, na ọ dịghị mfe imebi. Nke kachasị mma n'ime ihe atọ ahụ.
PMMA （Mmetụta acrylic dị n'ime is selected A na-ahọrọ acrylic dị n'ime, nke nwere ike dị elu ma dị mma karịa nkịtị acrylic. Akụkụ nke windshield mepụtara doro anya na ọ bụ eze nke ọnụ ahịa arụmọrụ.
PVCkwanyere ： Dị mkpa na crisp, ogbenye mma adịghị atụ aro ya, ma price bụ ọnụ ala ..
Companylọ ọrụ na Asambodo
Featured ngwaahịa - Sitemap Motorcycle Gas Pedal, Ewepụghị Motorcycle Pedals, Vespa Gts Gtv 300 Akpa Akpa, Honda Nmax Windshield, Kawasaki akpa akpa, Vespa Gts 300 Gtv Akpa ibu,